आज मिति २०७७, पुस २९ गते बुधबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित) – Nepali news portal
आज मिति २०७७, पुस २९ गते बुधबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित)
२९ पुस २०७७, बुधबार ०८:०२ January 13, 2021 काठमाडौं डेष्क
मेष : विजय समारोहहरूले पनि तपाईंलाई अत्यन्तै आनन्द दिनेछ। तपाईंले यस आनन्दलाई साथीहरूसँग आनन्दसँग बिताउन सक्नुहुन्छ। अरू मान्छेको सुझाव सुन्ने र काम गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। भावनात्मक रोकावटले तपाईंलाई समस्यामा पार्नेछन्। काममा आजको दिन एउटा अद्भुत दिन जस्तो देखिन्छ। तपाईंको जोडीले छिमेकीमा सुनेको कुरालाई लिएर मुद्दा बनाउन सक्छन्।
वृष : पिउँदा र खाँदा होसियार हुनुहोस्। बेवास्ताले तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ। यदि सञ्चार र छलफलहरू राम्रो तरीकाले भएनन् भने – तपाईंले रीस उठेर पछि पछुताउनु पर्ने कुरा बोल्न सक्नुहुन्छ – केही बोल्नु अघि राम्ररी सोच्नुहोस्। तपाईं एक पटक आफ्नो जीवनको प्रेम भेटेपछि, अरू केही आवश्यक पर्ने छैन। तपाईंले आज यो सत्यको महसुस गर्नुहुनेछ। आफ्नो तागत र आफ्नो भविष्यको योजना पुन: आकलन गर्ने समय। राम्रो खाना र रोमान्टिक क्षण; सबै आज तपाईंलाई प्राप्त हुनेछन्।
मिथुन : डरको डरलाग्दो राक्षससँग लड्न आफ्नो विचारमा केही सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, अन्यथा तपाईं यो कट्टर भूतको निष्क्रिय र बेरहमी सिकार बन्नुहुनेछ। बच्चाहरुले हेरचाहको माग गर्छन तर आनन्द ल्याउँछन्। लामो समयसम्म एक्लो काटेको समयको अन्त भयो – तपाईंले आफ्नो जीवनसाथी पाउने समय आएको छ। तपाईंको मालिकले आज तपाईंका कामको प्रशंसा गर्न सक्छ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्नेछन्।
कर्कट : तपाईं दीर्घ रोगबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। खर्चमा वृद्धि हुन्छ तर आयमा वृद्धि हुनाले तपाईंलाई तिर्न सजिलो पर्नेछ। तपाईंको जोडीले आनन्द दिने प्रयास गर्नाले आज आनन्द भरिएको दिन हुनेछ। आज साँझ जिस्क्याउने कार्यमा नलाग्नुहोस्। नयाँ साझेदारी आज कष्टपूर्ण हुनेछ। आज तपाईं आफ्नो जोडीसित आफ्नै तनाउको कारण झगडा गर्न सक्नुहुन्छ र वास्तवमा कुनै कारण हुँदैन।
सिंह : आफ्ना मित्रको मद्दतले वित्तीय समस्याहरुको समाधान गरिनेछ। आज तपाईंलाई केही समस्याको सामना गर्नु पर्नेछ – तर व्यावहारिक हुनुहोस् र सहयोग गर्ने मान्छेबाट चमत्कारको आशा नगर्नुहोस्। तपाईं प्रेमको मूडमा हुनुहुनेछ – र अवसर पनि प्रशस्त हुनेछन्। तपाईंको विश्वास बढ्दैछ र उन्नति स्पष्ट छ। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
कन्या : धेर नखानुहोस् र तन्दुरूस्त हुनको लागि नियमित रूपमा स्वास्थ्य क्लब जानुहोस्। आफ्नो गृहकार्य पूरा गर्न छोराछोरीलाई सहयोग गर्ने उचित समय। आज तपाईंको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको धेरै प्रशंसा हुनेछ र अनपेक्षित पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। लामो समय पछि, तपाईंलाई आफ्नो जीवन साथीसँग खर्च गर्न प्रशस्त समय प्राप्त हुनेछ।
तुला : योग र ध्यान तपाईंलाई तन्दुरूस्त र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन मद्दत गर्नेछ। मान्छे तपाईंबाट के चाहन्छन् र के जरूरी छ भन्ने कुरा तपाईंले ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तो देखिन्छ तर आज खर्च गर्नमा त्यति धेरै उदार पनि हुने प्रयास नगर्नुहोस्। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। तपाईंले एउटा मायालु र समझदार मित्र भेट्नु हुनेछ। तपाईंले आफ्नो विचार राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभयो र काममा आफ्नो सङ्कल्प र उत्साह देखाउनु भयो भने – तपाईंलाई फाइदा हुने सम्भावना छ। तपाईंलाई आफ्नो जीवनमा रोचक कुरा होस भनेर लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ भने – तपाईंले केही राहत पाउने पक्का छ। तपाईंलाई आफ्नो जोडीले विशेष ध्यान दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
वृश्चिक : तपाईंको लगातार सकारात्मक सोचलाई पुरस्कृत गरिनेछ। किनकि तपाईं आफ्नो प्रयासमा सफल हुने सम्भावना छ। नयाँ निवेश गर्नु पर्दा स्वतन्त्र भएर आफ्नो निर्णय आफैं लिनुहोस्। कार्डमा एकजना रोचक व्यक्तिसँग भेट हुने सम्भावना देखिन्छ। काम गर्ने आफ्नो वरिष्ठ आज स्वर्गदूतहरूको अभिनय गरेको जस्तो देखिन्छ। कुनै पनि समस्यालाई हटाउनको लागि इच्छा भएमा केही पनि असम्भव हुँदैन। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
धनु : आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किनुहोस् र तपाईंलाई साँच्चै आनन्द आउने काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आज तपाईंले भूमि, अचल सम्पत्ति, वा सांस्कृतिक परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईं अचाहिंदो उदार भएमा नजिकका मानिसहरूले तपाईंको अनावश्यक लाभ लिन सक्छन्। तपाईं मायालु मुडमा हुनुहुनेछ – त्यसैले आफ्नो र आफ्नो प्रियको लागि विशेष योजना बनाउने निर्णय गर्नुहोस्। तपाईंले अरूको सहयोग बिना महत्त्वपूर्ण कामहरू संचालन गर्न सक्छु भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईंले ठूलो गल्ती गर्नुहुँदैछ। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
मकर : तपाईंको ऊर्जा स्तर उँचो हुनेछ। बच्चाहरुले तपाईंलाई घरेलू काम पूरा गर्न मद्दत गर्नेछन्। अनपेक्षित रोमान्टिक झुकाव हुनेछ। तपाईं एक दिनको बिदामा जानु हुँदैछ भने चिन्ता नगर्नुहोस् – तपाईंको अनुपस्थितिमा पनि काम सजिलै चल्नेछ। कुनै अनौठो कारणले गर्दा समस्या भएमा – तपाईं फर्केर आएपछि यसलाई सजिलै समाधान गर्नुहुनेछ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको लागि साँच्चै विशेष कुरा गर्नेछन्।
कुम्भ : कार्यस्थलमा वरिष्ठबाट दबाव र घरमा कलहले केही तनाउ ल्याउन सक्छ – जसले तपाईंका कामको एकाग्रतामा बाधा पुर्याउन सक्छ। तपाईं यात्रा र पैसा खर्च गर्ने मुडमा हुनुहुनेछ – तर त्यसो गर्नुभयो भने तपाईं पछुताउनु हुनेछ। कुनै मानिसहरू आफुले गर्न सक्ने भन्दा बढी प्रतिज्ञा गर्छन – कुरा मात्रै गर्ने र कुनै परिणाम नदिने मानिसहरूलाई बिर्सिनुहोस्। व्यवसायीको लागि राम्रो दिन। व्यापारको उद्देश्य लिएर अचानक गरिएको यात्राले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ। आज तपाईंका वैवाहिक जीवन मामलाका कुराहरू साँच्चै रमाइला हुनेछन्।
मीन : कामको दबावले आज केही तनाउ ल्याउन सक्छ। प्रेम-सङ्गति र सम्बन्ध गाँसिनेमा वृद्धि हुने। आज रोमान्सको लागि कुनै आशा छैन। तपाईं समय नै पैसा हो भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो उच्चतम लक्ष्यमा पुग्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। एउटा सानो कुरा भए तापनि, तपाईंका जोडीले ढाँट्नाले आज तपाईंलाई दुख हुन सक्छ।
माधवजी मेरो पक्षमा, म माधवजीको पक्षमा होइन, हामीले एकता गरेका हौं – प्रचण्ड